साथीको श्रीमतीसँग बसेकाे यस्तो स’म्बन्धको पोल खुलेपछि… – PathivaraOnline
Home > समाचार > साथीको श्रीमतीसँग बसेकाे यस्तो स’म्बन्धको पोल खुलेपछि…
admin November 9, 2020 November 9, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाडौं, । सहकर्मीकै श्रीमतीसँग प्रेम सम्बन्ध राखी त्यसबारे पोल खुलेपछि साथीकै ज्यान लिने व्यक्ति एक वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । मकवानपुरका मान कुमार थिङलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको हो । गत वर्ष २८ साउनमा उनले ललितपुरको गुहेपोखरी बस्ने उदयपुरका हरि खड्काको ज्या’न लिएका थिए । खड्का र तामाङबीच सँगै मुर्ती बनाउने क्रममा चिनजान भएको थियो । हरिकी श्रीमती विष्णुसँग उनी नजिकिएका थिए ।
मानबहादुर र विष्णुबीच म्यासेज आदान प्रदान भएको हरिले थाहा पाएपछि वि वाद भएको थियो । त्यसपछि मानबहादुरङले हरीलाई भेट्न बोलाएर कु टपि ट गरी ज्यान लिएका थिए । सो घटनामा संलग्न मृतककी श्रीमती विष्णुसहित धने भन्ने आरुष थिङ, दिपक बम्जन, राज बम्जन तथा सागर वाईवालाई महानगरीय अ पराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले पहिला नै पक्राउ गरिसकेको थियो ।
खुम्य अभियुक्त खड्का त्यसबेला भारत भागेका थिए । उनलाई निरन्तर खोजी गरी मकवापुरबाट पक्राउ गरिउको महाशाखाका एसपी ईश्वर कार्कीले बताए ।-दृष्टिबाट
डेंगु बढ्यो भनेर लामखुट्टेविरुद्ध आन्दोलन गर्ने ? – प्रधानमन्त्री !
‘चिया खान आउँछु’ भन्दै प्रचण्ड देउवा निवास पुगेपछि…